Ukuma kokugcina kukaTrump – phakathi kwesitolo sezocansi nendawo yokushiswa izidumbu | Scrolla Izindaba
Ukuma kokugcina kukaTrump – phakathi kwesitolo sezocansi nendawo yokushiswa izidumbu
Kungekudala nje, bekunemibono yokuthi uDonald Trump angaqala impi uma ehlulwa okhethweni lwangoLwezi.
Noma, enze noma yini ukuze ahlale emandleni.
Kuze kube manje lokhu akukenzeki.
Esikhundleni salokho, ngesikhathi nje uJoe Biden eqinisekiswa ukuthi uwinile, ithimba lezomthetho likaTrump labamba isithangami nabezindaba mayelana necebo labo lokulwa ezinkantolo, ngezicelo ezingezona futhi ezingamanga nezingaqinisekisiwe zokukhwabaniswa kwamavoti.
Lesi sehlakalo senzeke endaweni yokupaka izimoto esitolo sengadi edolobheni lase-Philadelphia. Isikhungo sengadi kanye ne-Four Seasons Total Landscaping bekuphakathi…
“Bekuphakathi kwesqhingi senganekwane”, isitolo sezocansi kanye nendawo yokushisa izidumbu
Kuqagelwa ukuthi, iqembu likaTrump lididwe ihhotela eliseduzane nalo i-Smart Seasons, kodwa-ke alikwazanga ukushintsha izinhlelo ngoba bese kuhlwile.